ဥက္ကာခဲမှုန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဥက္ကာခဲမှုန် များသည် ကြယ်တံခွန်၊ ဥက္ကာပျံနှင့် ဥက္ကာခဲတို့၏ အပိုင်းအစများဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လေထုသို့ ဝင်ရောက်ကာ ကြယ်ကြွေခြင်းဖြစ်စဉ်များအဖြစ် ကောင်းကင်ယံတွင် မြင်တွေ့ရသည်။ ဥက္ကာခဲမှုန်များကို အမျိုးအစား ၃ ခု ခွဲခြားနိုင်ပြီး ကျောက်ခဲဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဥက္ကာခဲမှုန်၊ သံသတ္တုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဥက္ကာခဲမှုန်နှင့် ကျောက်ခဲ-သံသတ္တုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဥက္ကာခဲမှုန်တို့ဖြစ်ကြသည်။ အချို့သော ဥက္ကာခဲမှုန်များသည် ကြီးမားပြီး မီးတောက်ပေါက်ဝများကို ဖြစ်စေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျရောက်သည့် ဥက္ကာခဲမှုန်များ မဟုတ်ဘဲ လကမ္ဘာနှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်တို့၌လည်း ကျရောက်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
↑ McSween၊ Harry (1999)။ Meteorites and their parent planets (2nd ed.)။ Cambridge: Cambridge University Press။ ISBN 0521583039။ OCLC 39210190။
↑ McSween Jr., Harry Y. (1976). "A new type of chondritic meteorite found in lunar soil". Earth and Planetary Science Letters 31 (2): 193–199. doi:10.1016/0012-821X(76)90211-9. Bibcode: 1976E&PSL..31..193M.
↑ Rubin, Alan E. (1997). "The Hadley Rille enstatite chondrite and its agglutinate-like rim: Impact melting during accretion to the Moon". Meteoritics & Planetary Science 32 (1): 135–141. doi:10.1111/j.1945-5100.1997.tb01248.x. Bibcode: 1997M&PS...32..135R.
↑ "Opportunity Rover Finds an Iron Meteorite on Mars"၊ JPL၊ 19 January 2005။ 12 December 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥက္ကာခဲမှုန်&oldid=413104" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၁:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။